Mmadụ 4 nwụrụ na ụgbọ elu ụgbọelu Czech na France
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Mmadụ 4 nwụrụ na ụgbọ elu ụgbọelu Czech na France
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa na Czechia • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Na mbido otu ụbọchị ahụ, ụgbọ elu inyinyo ọkụ dara n'okporo ụzọ awara awara nke ugwu France nke Voignarou, wee gbuo mmadụ abụọ nọ n'ụgbọ ahụ.
Ụgbọ elu nwere njin ọkụ dara na Czech Republic taa.
Mmadụ abụọ nọ n'ụgbọelu ahụ nwụrụ n'ihe mberede.
Mmadụ abụọ nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu na France
Mmadụ abụọ nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu ụgbọ elu na-enye ọkụ dị nso n'obodo Kladno dị nso na Prague na mpaghara Czech Republic.
Ọ bụ onye nnọchi anya ndị uwe ojii Czech bụ Lucia Novotna kọrọ akụkọ ụgbọelu ahụ na Satọde, Septemba 4.
Onye uwe ojii ahụ kwuru, "mmadụ abụọ nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu ụgbọelu ụgbọelu dị nso n'obodo Kladno."
Ihe mberede a mere obere oge ka elekere 14:00 (elekere abụọ nke abalị) Oge Etiti Europe.
Ndị uwe ojii Czech na -enyocha ihe kpatara ihe ahụ ugbu a.
Na mbido otu ụbọchị ahụ, ụgbọ elu inyinyo ọkụ dara n'okporo ụzọ awara awara nke ugwu Voignarou nke France. Mmadụ abụọ nwụrụ n'ihe mberede ahụ.
Ihe mere ị ga-eji chọọ weebụsaịtị onye ahia ahia